हे…सहिद मर्‍यौं, ठिकै गर्‍यौं — OnlineDabali
हे…सहिद मर्‍यौं, ठिकै गर्‍यौं
Posted on January 26, 2018 by अनलाइन डबली
यो मौसम राज्यले मनाउने सहिद सप्ताहा को हो । हे, सहिद …तिमी मर्नै पर्थ्यो, मरेर राम्रै ग¥यौं । बाँचेका भए कतै आप्mनै लासको तिमी पनि मलामी जानु पथ्र्यो ! वा कतै चाकरी चापलुसी र सिंहदरवारको वरिपरी फन्को मारिरहेको भेटिन सक्थ्यौं । कतै समानुपातिक र उम्मेदवारमा आफनो नाम नपरेकोमा फेसबुके धारेहात लगाएर मालिकलाई गाली बकिरहेका पनि हुँन सक्थ्यौं । तिमी मर्नै पर्ने थियो मर्‍यौं । राम्रै गर्‍यौं ।
तर, हे सहिद…तिमी मरेर पनि सुख भने पाएनौं । तिम्रा हकवालाहरुले हरेक सभा सम्मेलन, मिटिङमा एक मिनेट मौनधारणा गरेर तिम्रो खिल्ली उडाउँछन् । पछ्याउनु नपर्ने राजनीतिक धन्दाका तिमी एउटा गहना मात्र बनेका छौं । तिमीलाई सामाजिक ब्यभिचारीसँगै लस्करैमा राखिएको छ । सहिद र १० लाख बराबर भएको छ । शब्दको अनर्थ नै भएको छ । म¥यौं ठिक ग¥यौं, यो हविगत त देख्न् परेन । सोँच त बाँचेको भए तिमी पनि के हुन्थ्यौ ?
राज्यको, पार्टीको, समूहका आ–आफना सहिद छन् । नेपालमा नयाँ वर्षजस्तै अनेकौं प्रकारका सहिद छन्, सहिद दिवस छन् । आपसी झैझगडामा मारिएका डन पनि सहिद छन् । राज्यको, पार्टीको, समूहका सहिदहरु छन् । राज्यका आँकडामा घोषणामा, पुस्तिकामा हेर्ने हो भने हजारौं सहिदको देश हो यो । अर्थात कुनैपनि प्रसंगमा, घटनामा कोही मर्छ भने उ सहिद बनिहाल्छ । हाम्रो देशमा मृतक र सहिद एक आपसका पर्यावाची शब्द बनिसके ।
सहिदको खेती हाम्रा विशेषता भए । तिमी त्यही असंख्य लस्करमा राखिएका एउटा गुमनाम लास मात्र हौ….. मर्‍यौं ठिकै गर्‍यौं । बाँचेको भए, तिमीलाई आप्mनै लास गरौँ हुन्थ्यो, गन्हाउन सक्थ्यो । आज तिमीलाई सहिद भन्नेहरुले नै तिमलिाई दुत्र्काथे ।
‘भारतीय दलाललाई छपकैयाबाट लखेट्छौं’
मध्यरात धनुषा र पाँचथरमा जीप दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु